warkii.com » Ra’iisal Wasaaraha Ingiriiska Ee Boris Johnson Oo Go’aan Ka Gaadhaya Kulanka Manchester City vs Real Madrid
Ra’iisal Wasaaraha Ingiriiska Ee Boris Johnson Oo Go’aan Ka Gaadhaya Kulanka Manchester City vs Real Madrid
Lugta labaad ee Manchester City iyo Real Madrid ee wareegga 16ka tartanka Champions League ee garoonka Etihad Stadium lagu qaban lahaa August 7 ayaa gacanta u galay Ra’iisal Wasaaraha UK oo go’aan ka gaadhi doona, kaddib markii ay caddaatay in sharciga xakamaynta caabuqu uu dhibaato ku noqonayo qabsoomidda ciyaartan.
Dawladda UK ayaa xayiraad saartay dadka uga imanaya waddanka Spain, waxaanay gelayaan 14 maalmood oo karantiil ah oo aan loo ogolaanayn inay bulshada soo dhex-galaan, waxaanu sharcigaasi qabanayaa ciyaartoyda Real Madrid haddii ay u safraan Ingiriiska si ay ula soo ciyaaraan Man City.
Manchester City ayaa rajaynaysa in Dawladda UK gaar ahaan Ra’iisal Wasaare Boris Johnson uu axsaan ugu sameeyo kulankan oo aan lagu qaadin ciyaartoyda Real Madrid sharciga xakamaynta fayraska Korona, isla markaana loo ogolaado in si toos ah ay ciyaartoydu usoo galaan amgaalada Manchester.
Oliver Dowden oo ah xoghayaha UK u qaabilsan ciyaaraha ayaa hore u sheegay in kulamada Champions League iyo tartanka baratanka baabuurta ee Fomrula ay u dhici doonaan sidii loo qorhseeyey, waxaana la rumaysan yahay in Dowden aanu beddelin arrintan xataa inkasta oo sharci cusub la hirgeliyey Sabtidii.
Xidhiihdka kubadda cagta UEFA ayaa jawaab rasmi ah ka sugaya Ingiriiska, isla markaana ay u caddeeyaan haddii ciyaartoydu ay carqalad la’aan ku geli doonaan UK, ugulana ciyaari karayaan Man City.
Kulankii hore ee ka dhacay labada kooxood oo 2-1 ay ku badisay Manchester City, ayaa waxa uu hadda si buuxda gacanta ugu jiraa Boris Johnson, waxaana go’aankiisa la sugi doonaa muddo toddobaad ah, iyadoo Real Madrid ay door bidayso in ciyaartan loo raro Portugal si uu garoonku dhexdhexaad ugu noqdo, halka Man City ay ku adkaysanayso in Etihad uu martigelinayo.